ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် မှအရည်အသွေးမြင့် ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအဖြစ် Taiwanကျနော်တို့အတွက်အထူးပြု ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ ကျနော်တို့ကပစ္စည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, အရောင်းနှင့်အရစ်ကျဆယ်စုနှစ်အတွင်းကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံထက်ပိုရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားက၌ကြီးသောဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နာမည်ကောင်းကြီးစွာသော customers'support အနိုင်ရခဲ့သည်နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အစွမ်းထက်ဖြစ်လာကြပါပြီဟု, အတိုင်းအတာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် manufactory ourself ပိုင်ဆိုင်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံ - JH-640/JH-650SS
ပစ္စည်း:ကြေးထိပ်,ကြေးဝါသံ rivet သံမဏိနှဲ့ Alloy အခြေစိုက်စခန်း
ဆး.ဒဗလျူ.:၁၃ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၅ ကီလိုဂရမ်
သတ္တုကိုယ်ထည်:ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသောပွတ်တိုက်မျက်နှာပြင်သည်တောက်ပသောအသွင်ကိုဆောင်စေသည်.အကြမ်းခံနွေ ဦး နှင့်သံမဏိလှော်တက်များသည်စစ်မှန်သောအသံကိုကူညီပေးသည်.အလူမီနီယံအလွိုင်းကွင်းသည်ခိုင်ခံ့သောတပ်ဆင်မှုကိုသေချာစေသည်
လက်ကိုင်အများစုနှင့်အဆင်ပြေစွာခေါ်ဆိုရန်လွယ်ကူသည်:သံတူသည်ခေါင်းလောင်းကိုအလွယ်တကူမြည်ရန်ကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိသည်.အရွယ်အစားနှစ်ခုပါသောရော့ကွင်းနှင့်အချင်း ၂၀ မီလီမီတာမှ ၂၅ ထိရှိသောလက်ကိုင်နှင့်အံကိုက်ဖြစ်သည်.၄ မီလီမီတာ(0.၇၉ လက်မ-၁ လက်မ)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/vintage-bike-bell.html
အကောင်းဆုံး ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ခေတ်ဟောင်းစက်ဘီးဘဲလ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan